Nidaamka iibinta korantada ee kaarka IC Tilmaanta
Qaybta 1aad program barnaamijka guud 1.Birada hore Nidaamka saadka ayaa ah nidaam maareyn ballaaran. Maareynta isticmaalka korantada shirkadaha, guryaha iyo guryaha ayaa qayb muhiim ah ka ah. Xatooyada korantada, korantada daadinta, iyo korantada xad dhaafka ah shirkadaha, guryaha, ...
Mustaqbalka mustaqbalka ee mitirrada tamarta korantada oo horay loo sii diyaariyey
waxaa maamula 20-06-01
Iyada oo horumarka degdegga ah ee bulshada, la soo saaray shey loo yaqaan mitirka tamarta diyaarka ah, kaas oo aan si wax ku ool ah u yaraynin biilasha korantada ee adeegsadayaasha gobollada qaarkood, laakiin sidoo kale siiya ku-habboonaanta nidaamka korantada isla mar ahaantaana si fiican u ilaaliya amniga amniga. Kadib, waa maxay ...
kormeerka isticmaalka tamarta “Guri-ilaaliye”
Haatan shirkaduhu waxay iskudayaan habab kala duwan oo ay ku habeeyaan isticmaalkooda tamarta isla markaana ay hoos ugu dhigaan qiimaha wax soo saarka. Tusaale ahaan, maaraynta awooda dhaqameed waxay adeegsataa habab tilmaameed si ay u nuqulaan una dejiyaan, kuwaas oo leh dhibaatooyin ay ka mid yihiin isku duubnaan xumo, jadwal hoose, iyo maamul xumo. Sidee waqtiga-dhabta ah ...